Recipe mora mora - Fomba Fanamboarana
recette ovy scalloped ho an'ny vahoaka
fomba fahandro ho an'ny paiso vita amin'ny paiso vita amin'ny crescent rolls
parmesan bow fatorana salady paty
Recipe mora mora
izany Recipe mora mora dia hamita saika ny sakafo rehetra! Ny seleria sy ny tongolo ary ny dibera dia atsipy amin'ny cubes mofo maina, avy eo asiana ron-kena ary endasina mandra-pahatongan'ny hafanana sy volamena.
Aza diso hevitra aho tiako ovy nopotsehina , fa hitahiry toerana foana ho an'ny famonoana olona ao an-trano noho ny ovy aho. Afaka nihinana fonosana isaky ny sakafo aho!
Ahoana ny fomba hanaovana Turkey Stuffing
Ny stuffing dia iray amin'ireo lovia lehibe indrindra amin'ny fialantsasatra na fisaorana Thanksgiving. Aroso miaraka aminy kaserola tsaramaso maitso , ovy mamy nopotsehina , turkey, gravy turkey (mazava ho azy), ary aza adino ny voatavo pie ho an'ny tsindrin-tsakafo!
Ny fomba fahandro sasany dia mametaka zavatra toy ny karaoty, voaloboka maina na cranberry maina. Na dia mety ho fanampiny tsara aza ireo rehetra ireo, tsy misy mampitaha ity fomba fahandro mahazatra ity!
Manimanam-borona no mpangaroharo zava-manitra tsara indrindra ho an'ity fomba famonosana turkey ity (ary indraindray dia azo amidy mandritra ny Thanksgiving)! Raha mbola tsy nampiasa zava-manitra akoho amam-borona ianao, dia fifangaroan-tsiro manitra toy ny olon-kendry, thyme ary rosemary ary manampy tsiro matsiro amin'ny lasopy, laoka ary kasety. Azonao atao koa ny mampiasa ny zava-manitrao (na manaova Fomba fananganana akoho amam-borona ), Heveriko fa ny olon-kendry no zava-manitra be mpitia indrindra amin'ny famenoana.
Ahoana ny fomba fanamboarana entana
Ny tetika mankany amin'ny famonoana kilasika tsara avy eo am-boalohany dia ny fahazoana antoka fa maina tokoa ny mofonao alohan'ny ampianao ron-kena. Raha mividy ny mofonao andro vitsivitsy mialoha ianao, dia triaraho, na tapatapaho ho cubes, ary maina ao anaty vilia mandritra ny andro vitsivitsy eo amin'ny latabatrao. Na inona na inona karazana mofo, dia matetika no mampiasa kôkôla fotsy sy fotsy.
Ao anaty pinch dia tiako ny mametraka cubes mofo vaovao ao anaty lafaoro amin'ny 300 ° F mba hamainina mandritra ny 10 minitra (aza hadinoina ny mametafeta / manatsoka azy)! Raha manamaina mofo vaovao ao anaty lafaoro ianao dia tsy mila ron-kena firy.
Aleoko masaka ao anaty lovia casserole (izay mety hampiakanjo azy ara-teknika azy) na hanaovana azy Crock Pot Stuffing . Ny fandrahoana ny vorontsiloza sy ny entona dia manome antoka fa samy hahatratra ny mari-pana mety izy ireo nefa tsy misakafo loatra.
Ny stuffing dia azo atao mialoha ny fotoana ary tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana ao anaty lovia casserole. Raha mameno vorontsiloza dia tokony ho hafanana na mangatsiaka ny fofona ary tsy afangaro ao anaty vorontsiloza alohan'ny handrahoana azy.
Raha manamboatra ny vorontsiloza ianao dia tadidio ny hampangatsiahana azy tanteraka aloha. Raha tsy izany dia hipetraka amin'ny maripana mahandro tsy azo antoka ilay vorona mandritra ny fotoana lava. Raha mameno turkey dia mila masaka hatramin'ny 165 ° F ny afovoan-tsiranoka satria miditra ao anaty fantsona ny fikorianan'ny vorona.
Handroso eo alohan'izay
Ny stuffing dia lafiny tsara satria mora azo alohan'ny fotoana! Miomàna fotsiny araka ny torolàlana, rakofana tsara ary ampidiro ao anaty vata fampangatsiahana hatramin'ny 48 ora.
Mba hanendasana azy dia esory ao anaty vata fampangatsiahana farafahakeliny 30 minitra alohan'ny hanendasana azy. Miomàna araka ny torolalana (mety mila manampy minitra vitsy fanampiny ianao raha mbola mangatsiaka avy amin'ny vata fampangatsiahana).
Ahoana ny fomba fanamaintanana
Ny olon-drehetra dia tia ambin-tsakafo turkey. Manangona sakafo hariva any Torkia na sandwich turkey mafana no fomba tiako indrindra hankafizako azy ireo, saingy indraindray tsy azonao atao ny manatona azy ireo amin'ny fotoana haharatsy azy ireo. Aza matahotra, satria moka tsara ny vorontsilaza! Atsofohy fotsiny ao anaty vata fampangatsiahana dia tokony haharitra amam-bolana maro izy io.
Mba hamerenana indray ny famonoana azy dia apetaho amin'ny lafaoro amin'ny 350 ° F mandritra ny 20 minitra ary asiana koveta kely mba tsy ho maina.
Fotoana fanomananadimy ambin'ny folo minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo55 minitra Fotoana manontolo1 ora 10 minitra Fanompoana12 servings MpanoratraHolly Nilsson Ity fomba fahandro mahazatra ity dia hameno ny sakafo rehetra! Ny seleria sy ny tongolo ary ny dibera dia atsipy amin'ny cubes mofo maina, avy eo asiana ron-kena ary endasina mandra-pahatongan'ny hafanana sy volamena. pirinty Pin
▢rOA tongolo kely diced
▢4 bary seleria diced
▢⅔ kapoaka dibera
▢1 ½ sotrokely fanamanam-borona na olon-kendry ambanin'ny sotrokely ½
▢sira mba hanandrana
▢12 kaopy mofo goba
▢3-4 kaopy ron-kena
▢rOA tablespoons persily vaovao
▢1 sotro anana vaovao olon-kendry, thyme, rosemary
Atsonika anaty dibera lehibe amin'ny hafanana antonony ny dibera. Manampia tongolo, seleria ary akoho amam-borona (sy rosemary raha mampiasa). Andrahoy amin'ny ambany-ambany mandra-pahavitrana (aza volontany), 10-12 minitra eo ho eo.
Ataovy ao anaty lovia lehibe ny cubes mofo. Ampiana fangaro tongolo, persily ary anana vaovao.
Arotsaho eo amboniny ny ron-kena mandra-mando ny cubes (fa tsy soggy) ary atsipy moramora. Mety tsy mila ny ron-kena rehetra ianao. Manaova sira sy dipoavatra mba hanandrana.
Ataovy mifangaro ao anaty lovia aroso, asio dibera sy fonony fanampiny.
Manendasa 35 minitra, manala sarona ary manendasa 10 minitra fanampiny.
Raha mampiasa rosemary amin'ny anana dia mahandro miaraka amin'ny tongolo / seleria. Mba hamenoana vorontsiloza, ny fenitra dia tokony hampangatsiaka tanteraka ao anaty vata fampangatsiahana farafaharatsiny 45 minitra. Manoloana izany: Miomàna araka ny torolàlana, rakofana tsara ary ampidiro ao anaty vata fampangatsiahana hatramin'ny 48 ora. Mba hanendasana azy dia esory ao anaty vata fampangatsiahana farafahakeliny 30 minitra alohan'ny hanendasana. Miomàna araka ny torolalana (mety mila manampy minitra vitsy fanampiny ianao raha mbola mangatsiaka avy amin'ny vata fampangatsiahana).
Kaloria:185,Karbohidraty:16h,Proteinina:3h,Tavy:iraika ambin'ny foloh,Tavy mahavoky:6h,Cholesterol:27levitra,Sodium:462levitra,Potasioma:175levitra,Fibre:1h,Sugar:rOAh,Vitamina A:435IU,Vitamina C:6.8levitra,Kalsioma:61levitra,Vy:1.4levitra
Teny lakileresipeo famonoana turkey Mazava ho azysakafo hariva masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
REPINO ity Recipe Super Stuffing ity